उत्पादित अदुवा बिक्री नहुँदा घरमै कुहिन थालेपछी किसान मर्कामा ! - Seto Khabar उत्पादित अदुवा बिक्री नहुँदा घरमै कुहिन थालेपछी किसान मर्कामा ! - Seto Khabar
उत्पादित अदुवा बिक्री नहुँदा घरमै कुहिन थालेपछी किसान मर्कामा !
खोटाङ, फागुन २४ । उत्पादन गरेको अदुवा बिक्री नभएपछि जिल्लाका किसान मारमा परेका छन् । जिल्लाका अधिकांश किसानले उत्पादन गरेको अदुवाले उचित बजार मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भण्डारण गरेको ठाउँमै अदुवा कुहिन थालेपछि किसान मारमा परेका छन् । जिल्लाका पकेट क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा बिक्री नहुँदा घरमै कुहिन थालेको अदुवा व्यवसायी महासंघका जिल्ला अध्यक्ष संग्राम राईले बताउनुभयो । “गत वर्षमा अदुवा बिक्रीबाट लाखौँ आम्दानी हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष बिक्री नभएपछि आँगनमै चाङ लगाएर राख्न बाध्य भएका छौँ ।”
विसं २०७१ मा प्रतिकिलो रु.८० देखि रु १५० सम्ममा बिक्री भएको अदुवाको बजार भाउ तीन वर्षयता ओरालो लागेको छ । हाल अदुवाको बजार भाउ प्रतिकिलो रु. २० देखि रु. ४५ सम्म कायम छ । अदुवा खरिदका लागि यसअघि काठमाडौँ तथा तराईका इटहरी, कटारी र गाईघाटबाट व्यापारी आउने गरेका थिए । यस वर्ष काठमाडौँ तथा तराईबाट कोही नआएको किसानले बताएका छन् ।